/ Products / Ny hafa / Fulvestrant (129453-61-8)
SKU: 129453-61-8. Sokajy: Ny hafa
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny famokarana maimaimpoana avy amin'ny gram ka hatramin'ny filamatry ny Fulvestrant (CAS 129453-61-8), eo ambany fitondran'ny CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Vovon-tsakafo dia mpanohitra ny mpanohitra ny mpanohitra. Tsy toy ny tamoxifen (izay misy fiantraikany amin'ny agonista ampahany) ary ireo tohiba aromatase (izay mampihena ny estrogen izay misy sela tumora), ny mendri-piderana dia mifamatotra amin'ny mpanolo-tsainan'ny estrogen ao amin'ny sela kanseran'ny nono, ka miteraka ny fametrahana ny estrogen ary mihena ny fatran'ny estrogen.
Karatra fototra fototra
Fulvestrant (129453-61-8) ampiasaina amin'ny fitsaboana steroïde
Fulvestrant (CAS 129453-61-8), ny marika dia Faslodex.
Ny Fulvestrant dia tonga vahaolana (rano) mba hampidirana tsimoramora amin'ny 1 hatramin'ny 2 minitra ao amin'ny hozatra ao amin'ny rambony. Fulvestrant (129453-61-8) dia entina dokotera na mpitsabo mpanampy ao amin'ny biraon'ny amedical. Matetika izy no omena isaky ny herinandro 2 ho an'ny doses voalohany 3 (andro 1, 15, ary 29) ary indray mandeha iray volana aorian'io. Hahazo fitsaboana roa ianao ao an-kibonao.
Fampitandremana amin'ny Fulvestrant
Ireo fanehoan-kevitra ratsy manaraka dia resahina amin'ny an-tsipiriany bebe kokoa amin'ny fizarana hafa amin'ny fametahana etsy ambony: Fahavoazana ny fandosirana, fitomboan'ny fitaintainana amin'ny marary amin'ny fihenan'ny alikaola, fanehoan-kevitry ny tranokala, ny toetran'ny embbio-fetala.
Ny hormones dia zavatra simika izay entin'ny vatana ao amin'ny vatana, izay mamelona ny rà ary mampisy fiantraikany amin'ny sela hafa. Ohatra, ny testosteron hormone atao amin'ny testicles ary tompon'andraikitra amin'ny toetra lahy, toy ny fianteherana ny feo sy ny volo amin'ny vatana. Ny fampiasana hôpitoriana hormonina ho entina homamiadana dia mifototra amin'ny fijerena fa ny solona ho an'ny hormonina manokana izay ilaina amin'ny fitomboan'ny sela dia eo amin'ny sehatry ny sela misy sela. Ny fitsaboana hormona dia miasa amin'ny fijanonana ny famokarana hormone sasany, fanakanana ireo mpikatroka hormonina, na manolo ireo mpikaroka simika toy ny hormone mivaingana, izay tsy azo ampiasaina amin'ny sela mpikatroka. Ny karazana fitsaboana hormone isan-karazany dia sokajiana amin'ny asany sy / na ny karazana hormone misy fiantraikany.
Maro ny kanseran'ny nono dia manana mpanome rongony estrogen, ary ny fitomboan'ireto tumors ireto dia afaka manentana ny estrogen. Fulvestrant (129453-61-8) dia estrogen receptor downregulator, midika izany fa mifatotra amin'ny tranonkala mpanangona estrogen amin'ny fifaninanana amin'ny estrogen ao amin'ny vatana. Raha vao mijanona ao amin'ilay tranokala dia miteraka ny mpitsabo azy, ka manakana ny valin'ny valanaretina amin'ny estrogen.
Ahoana no hividianana Fulvestrant avy any AASraw